ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်များတွင် တော်လှန်လှုပ်ရှားမှုများမှာ ဗိုင်းရက်စ်ပိုးကဲ့သို့ပင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လျင်လျင်မြန်မြန် ကူးစက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ တူနီရှားမှသည် အီဂျစ်ဆီသို့။
အနီးအနားတိုင်းပြည်များဖြစ်သည့် ဂျော်ဒန်နှင့် ယီမင်တို့တွင်လည်း ဆန္ဒပြမှုများ၊ ဆူပူမှုများဖြစ်ပွားလာတော့သည်။ ထပ်မံပြန့်ပွားနိုင်သည့် နောက်တစ်နိုင်ငံမှာ ဆီးရီးယားဟူ၍ အသံများလည်း ပေါ်ထွက်နေဆဲ။
ဆန္ဒပြမှု ပျံ့နှံ့နှုန်းထားမှာ ကြောက်ခမန်းလိလိ။ ဤဆက်တိုက်ဖြစ်စဉ်များမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂၀၀ အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မကျေနပ်မှု ကာလများနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ၏ ပဲ့တင်သံများပင်တည်း။
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ဘာလင်တံတိုင်းကြီး ပြိုလဲပျက်စီးသည့် ရိုက်ခတ်မှုမှသည် ၁၈၄၈ ခုနှစ်တွင် ဥရောပတ၀ှမ်းလုံး ရုန်းကန်တော်လှန်ခြင်း ဖြစ်စဉ်များတွင် မတည်ငြိမ်မှုများသည် ပို၍ပို၍ မတည်ငြိမ်မှုများကို ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွား စေခဲ့ပါသည်။ ထပ်မံ၍ ဖြစ်ပွားရလေပြီ။ လူထုဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာများကြောင့် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု အလျင်အမြန် ဖြစ်ထွန်းလို့လာနေသည်။
“တော်လှန်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ ကူးစက်တတ်ပါရဲ့” ရိုလာမြို့၊ မစ်ဆော်ရီသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ စစ်သမိုင်းပညာရှင် ဂျွန်မက်မန်းနပ်စ်က မှတ်ချက်ပြုသည်။ “သမိုင်းကနေ သင်ခန်းစာ ယူကြဖို့ရာ ဆိုရင် အဲဒါ ဘယ်လိုပုံမျိုးနဲ့ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့ စဉ်းစားခန့်မှန်းလို့ မရနိုင်တာပါ။ ကြောက်စရာပေါ့နော။ တာ စလွှတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အင်အားတွေဟာ ဘယ်နေရာတွေအထိ ပျံ့နှံ့ သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။”
အဦးအစ သမိုင်း ဥပမာအနေဖြင့် ဗြိတိန်အင်ပါယာကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ဖူးသော အမေရိကန်တော်လှန်ရေးကို ပြရမည်ဟု ထင်ပါသည်။ ၁၇၇၆ ခုနှစ်တွင် အောင်ပွဲဝင်နိုင်မှုကြောင့် ပြင်သစ်များအတွက် အားတက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး သူတို့ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ရေးကိုလည်း ၁၇၈၉ ခုနှစ်တွင် ဆွတ်ခူး ရယူနိုင်ခဲ့ပြန်သည်။ ဤသည်မှာ သမိုင်းသုတေသီများ၏ အမြင်တူသော သုံးသပ်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
“တရားသော တော်လှန်ပုန်ကန်မှု အသစ်အသစ်တွေ အမြဲတမ်း ရှိနေပါဦးမယ်။ ဆက်သွယ်ရေး မီဒီယာ အသစ်တွေလည်း ရှိနေမှာပါ။ ဒါကတော့ လူ့မနော၊ လူ့သဘာဝပါ။ လူထုဟာ ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ်ခံရပြီဆိုရင်တော့ တော်လှန် ပုန်ကန်ကြမှာ အသေအချာပါပဲ။”
ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှာ ၁၈၄၈ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်သည်။ ဖိနှိပ်ခံ၊ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် မရှိရှာကြသော အလယ်လတ်တန်း အောက်လွှာလူထုကြီးက ဘုရင်လူးဝစ်ဖီလစ်၏ အဂတိလိုက်စားမှုများနှင့် အခွင့်ထူးခံ အုပ်ချုပ်မှုကို ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်တော်လှန်ခဲ့ကြ၏။ ဘုရင်လူးဝစ်ဖီလစ် တိုင်းပြည်မှ ထွက်ပြေးရသည်နှင့် တော်လှန်မှု အစဉ်အတန်းကြီးမှာ ဂျာမဏီသို့ ကူးစက်ခဲ့လေပြီ။ လူထု၏ တအုံနွေးနွေး၊ ကြိမ်မီးအုံ ပူဆွေးသောကများကလည်း ထုနှင့်ထည်နှင့် အဆင့်သင့် ရှိနေခဲ့သည်ပေပဲ။ တော်လှန်ပုန်ကန်မှုများမှာ ရပ်မနားနိုင်သေး။ ထိုမှဆက်လက်၍ သြစထြီးယား၊ ပိုလန်၊ ရုရှား၊ အီတလီတို့ကို ကျော်လွန်ပြန့်ပွား တော်လှန်ခဲ့ချေပြီ။
“တစ်ခုကနေ တစ်ခုဆီကို ဆက်တိုက်ကူးစက်ပြန့်ပွားခဲ့တာ အမှန်ပါပဲ။” မက်မန်နပ်စ်ကဆို၏။ “လူထုက ပြင်သစ်မှာ ဖြစ်နေတာကို မြင်လိုက်ရပြီ။ အေး... ဟုတ်တယ်ဟေ့၊ လုပ်လို့ရသားပဲ။ အချိန်ကျပြီလို့လည်း ထင်တယ်။ အဲဒီနှစ်မှာပဲ တောမီးလောင်သလို တော်လှန်ရေးဟာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ဖူးပါရဲ့။”
အခြားသော သာဓကများဆောင်ပါအံ့။ ရက်စက်သော အာဏာရှင် အမေရိကန် အစိုးရကို မကျေနပ်သဖြင့် ၁၈၆၀ ခုနှစ်တွင် တောင်ကာရိုလိုင်းနာနယ် ခွဲထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အယ်ဘားမာ၊ မစ္စစ္စပီနှင့် အခြားတောင်ပိုင်း ပြည်နယ်များက လိုက်ပါခွဲထွက်ခဲ့ကြသည့် ဒိုမီနိုသက်ရောက်မှုကြောင့် ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွားရလေတော့၏။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ဘာလင်တံတိုင်းကြီး ပြိုလဲခဲ့ရသည်မှာ ကွန်မြူနစ်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ကြသော ပိုလန်၊ ရိုမေးနီးယား၊ ဟန်ဂေရီ၊ ချက်ကိုစလိုဗေးကီးယားနှင့် ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံများ၏ တော်လှန်ရေးလှိုင်း ရိုက်ခတ်ချက်များကြောင့်ပင်တည်း။
ယခုဖြစ်ပွားနေသော အရှေ့အလယ်ပိုင်း အခြေအနေမှာ မတူသော နောက်ခံ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းများ ရှိနေပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း အတိတ်ကာလများ၏ ဖြစ်စဉ်များနှင့် ဆင်တူလွန်း ပေသည်ဟု ကော်နဲတက္ကသိုလ်မှ မျက်မှောက်ခေတ် အီဂျစ်သမိုင်းပညာရှင် ဇအဒ်ဖာမီက ဆို၏။
အခြားသော ကူးစက်တတ်သည့် တော်လှန်လှုပ်ရှားမှုများကဲ့သို့ပင် ယခုပုန်ကန်မှုမှာလည်း ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ်နေသော အာဏာရှင်တို့အပေါ် မကျေနပ်ချက်များ တအုံနွေးနွေး စုဆောင်းခဲ့ရသည့် လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာကပင် စတင်ခဲ့ကြောင်း သူက ရှင်းပြသည်။ မြို့ရွာအနှံ့ ကျယ်ပြန့်လာတော့၏။ အခြားသော ယဉ်ကျေးမှုပုံစံများ ပြောင်းလဲရခြင်း၌လည်း မြစ်ဖျားခံခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ပျော်စရာမကောင်းသော ကာလများမှာ မီးပွားကို စောင့်နေသည်နှင့် တူတော့သည်။ ဆက်တိုက် ပြိုလဲလာနေသည့် ဒိုမီနိုဖြစ်စဉ်များက ရိုက်ခတ်မည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ။
ယခုဖြစ်စဉ်၏ မီးပွားမှာ ဒီဇင်ဘာလလယ်လောက်က မိမိကိုယ်ကို မီးရှို့ခဲ့ရှာသော တူနီးရှား ဆန္ဒပြသမား တစ်ဦးရယ်ပါ။ နောက်ဆက်တွဲ ဆန္ဒပြမှုများက အလျင်အမြန်ပင် တူနီးရှား သမ္မတကို ထွက်ပြေးစေရသည် အထိပင်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင်လည်း အလားတူ ဆန္ဒပြပွဲများ ကူးစက်ခဲ့တော့သည်။
တစ်ခုတည်းသော ဆန့်ကျင်တော်လှန်မှုမှသည် ကူးစက်လာစေရန်အတွက် အဓိက သော့ချက်ကား “ဆက်သွယ်ရေး” ပင်ဖြစ်သည်ဟု ဖာမီက ထပ်လောင်းရှင်းပြသည်။ ၁၈၄၈ ခုနှစ်တွင်မူ များမကြာသေးမီက တီထွင်ခဲ့သော တယ်လီဂရဖ် ကြေးနန်းစနစ်ပင်ဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ် သတင်းစာများနှင့်အတူ နိုင်ငံတ၀ှမ်း ဖြစ်ပျက်နေမှုများကို ပြည်သူလူထုအတွက် သတင်း သဲလွန်စများ ပေးနိုင်ခဲ့လေခြင်း။
ယနေ့တွင်မူ ဖေ့စ်ဘွတ်၊ ယူကျု့နှင့် တွစ်တာ။ အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးများ ဖျက်ဆီး ခံရသော အခါတွင်မူ အီဂျစ် ဆန္ဒပြသူများသည် မူလ လက်ဟောင်းနည်းများဖြင့် သတင်းဆက်ခဲ့ပြန်သည်။ ဘာလုပ် ကြမည်ကို ပုံနှိပ် ဖြန့်ဝေကြခြင်းပင်။
တော်လှန်လှုပ်ရှားမှု ကူးစက်သည်ဟု ဆိုရာဝယ် လူထု၏သည်းခြေတွင် မျှော်လင့်ချက်နှင့် စိတ်အင်အားတို့ ရလိုက်ခြင်းက အဓိကဟု ဆိုရချေမည်။ မိမိတို့နှင့် အခြေအနေချင်းတူညီသော အခြားတိုင်းပြည် လူထုက တော်လှန်ပုန်ကန် တိုက်ပွဲဝင်ကြလေခြင်း။ .... ထို့ပြင်တ၀.... အောင်ပွဲခံ နေကြလေခြင်း။
“သူတို့လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ပုံစံပါလားလို့ လူထုက သိမြင်လာတယ်။ တကယ်ကို ဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ မြင်လာကြတယ်။” ဖာမီက ဆို၏။ “ကြောက်ရွံ့စိတ် အတားအဆီးကို ခွါချ ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။”
သမိုင်းက မတတ်နိုင်သည့် အချက်တစ်ချက်ရှိလေသည်။ ကျွမ်းကျင်သူ၊ ပညာရှင်ဆိုသူများက တော်လှန်ရေး မည်သည့် အချိန်တွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်မည်ဟု ဟောကိန်းထုတ်ရန် သမိုင်းက မလုပ်ပေးနိုင်ပါ။ မည်မျှအထိ ပြန့်နှံ့မည်၊ မည်သို့မည်ပုံ အဆုံးသတ်မည်တို့ကိုလည်း ခန့်မှန်းရန် မကူညီနိုင်။ ရလဒ်များမှာ အံ့ဘနန်း ဖြစ်ရလေ့ရှိသည်။ သို့သော် အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်ချင်မှ ဆောင်မည်။ အတိတ်ကို မျှော်ကြည့်ပြီး တော်လှန်ပုန်ကန်မှု အသစ်များသည် အနာဂတ်တွင် ဖြစ်ပွားလာနိုင်ခြင်းနှင့် အအေးမိရောဂါ ဗိုင်းရပ်စ်ကဲ့သို့ ကူးစက် ပြန့်နှံ့နိုင်ခြင်းတို့ကို တားမြစ်ရန်လည်း မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါ။ ဖာမီက ရှင်းပြခဲ့သည်။ တော်လှန်ရေး မည်သည် ဖော်မြူလာမရှိ။
“သမိုင်းက သင်ခန်းစာကို ဘယ်သူမှ မယူကြပါဘူး။” သူက ဆက်ပြောပြသည်။ “တရားသော တော်လှန်ပုန်ကန်မှု အသစ်အသစ်တွေ အမြဲတမ်း ရှိနေပါဦးမယ်။ ဆက်သွယ်ရေး မီဒီယာ အသစ်တွေလည်း ရှိနေမှာပါ။ ဒါကတော့ လူ့မနော၊ လူ့သဘာဝပါ။ လူထုဟာ ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ်ခံရပြီဆိုရင်တော့ တော်လှန် ပုန်ကန်ကြမှာ အသေအချာပါပဲ။”
Source: Discovery/ History Channel: Are Revolutions contagious? by Emily Sohn
Posted by မြန်မာကျောင်းဆရာ at 6:54 AM0comments Links to this post
Posted by မြန်မာကျောင်းဆရာ at 6:46 AM0comments Links to this post
Posted by မြန်မာကျောင်းဆရာ at 6:49 PM0comments Links to this post
Posted by မြန်မာကျောင်းဆရာ at 10:33 PM0comments Links to this post
“ဆရာဆရာမများအနေဖြင့် ကလေးများ လေ့လာနေသည့် သင်ခန်းစာအသစ်တို့ကို သိရှိထားနှင့်ပြီးသော အကြောင်းအရာတို့နှင့် ဆက်စပ်ပေးခြင်းဖြင့် ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်တွင် သိုမှီးသိမ်းဆည်းရန် လှုံ့ဆော်ပေးရာ ရောက်ပါသည်။ ”
ကျောင်းဆရာများအနေဖြင့် စာသင်ခန်းအတွင်း သင်ကြားခြင်းရလဒ်ကောင်းနှင့် ထိရောက်မှု ရှိစေရန်အတွက် ကျောင်းသားများ၏ သင်ယူလေ့လာပုံမှု အပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိသည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို နားလည်ထားသင့်ပါသည်။ လူသား၏ သိမှုဆိုင်ရာ အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံကို နားလည်ထားခြင်းဖြင့် စာသင်ကြားခြင်းနှင့် သင်ယူခြင်းတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါမည်။
ဆရာကိုယ်တိုင် တီထွင်ဖန်တီးထားသည့် စာသင်ကြားခြင်း နည်းလမ်းမျိုးစုံကို အသုံးပြုသင်ကြားခြင်းကြောင့် ကျောင်းသားများ၏ စိတ်ပါဝင်စားမှု၊ နိုးကြားတက်ကြွမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် သင်ကြားရန် ရွေးချယ်ထားသည့် အကြောင်းအရာကြောင့်လည်း ကျောင်းသားအနေဖြင့် အသိပညာကို ရရှိခြင်း၊ နားလည်ခြင်းနှင့် လက်တွေ့ အသုံးချနိုင်ခြင်း တို့အပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိနေပါသည်။ သင်ကြားမည့် အကြောင်းအရာကို သင့်တော်စွာ မရွေးချယ်ခြင်း၊ သိမှုဖြစ်ထွန်းစေရန် သင့်လျော်မှု မရှိဘဲ တက်ကြွသော သင်ယူမှုဖြစ်စေရန် အားထုတ်ခြင်းမှာ ဂိုးအကြိမ်ကြိမ် သွင်းသော်ငြားလည်း တစ်ဂိုးမှ မ၀င်ဘဲ ရှိနေသည်နှင့် တူနေပါသည်။
သိမှုစိတ်ပညာ cognitive psychology ဆိုင်ရာ လေ့လာ တွေ့ရှိချက်များအရ သင်ကြားမည့် အကြောင်းအရာ များနှင့် မည်သို့ သင်ကြားပုံတို့မှာ သင်ကြားခြင်း-သင်ယူခြင်း ရလဒ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာပညာရေးစနစ်များအတွင်းရှိ ဖတ်စာအုပ်များကို လေ့လာကြည့်ပါက သိသာ၊ မြင်သာပါသည်။ ကျောင်းသားများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အကြောင်းအရာတို့ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ တက်ကြွဖွယ်၊ ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်လိုစိတ်ဖြစ်ဖွယ် တင်ဆက်ထားပြီး အရောင်စုံလင်စွာလည်း ချယ်မှုန်းထားကြသည်။ စာသင်ခန်းအတွင်းဖြစ်စေ၊ ကိုယ်တိုင် လေ့လာရာတွင် ဖြစ်စေ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစေနိုင်သော်ငြားလည်း အောင်မြင်သော လေ့လာမှုဖြစ်စေရန် အခြားအရာများလည်း လိုအပ်ပါသေးသည်။ သင်ခန်းစာ မည်မျှ ရှုပ်ထွေးသည်နှင့် မဆိုင်ပါ။
သင်ယူလေ့လာရန် အကြောင်းအရာတို့မှာ လွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ခက်ခဲသည်ဖြစ်စေ ဤအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် ပိုမိုထိရောက်သော သင်ယူခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ရာသည်။
သင်ယူလေ့လာရမည့် အကြောင်းအရာတို့ကို ပိုင်းခြားလျက် နည်းနည်းစီ သင်ကြားခြင်းမှာ ကျောင်းသားများ၏ မှတ်ဥာဏ်နှင့် သိနားလည်မှုတို့အတွက် များစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ သင်ယူနေစဉ်ကာလအတွင်း အလုပ်လုပ်နေသည့် မှတ်ဥာဏ်မှာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စွမ်းနှင့် အချိန်ကာလ ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်ကို သုတေသနမှ လေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်စေ မှတ်ဥာဏ်၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုမှာ သတင်းအချက်အလက် အနည်းငယ်ကိုသာလျှင် ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်လေရာ တစ်ချိန်တွင် အကြောင်းအရာတစ်ခု၊ အတွေးအမြင်တစ်ကွက်၊ ကျွမ်းကျင်မှု တစ်ပိုင်းလောက်ကိုသာ အချိန်နှင့် ကိုက်ညီစွာ သင်ကြားသင့်ပါ၏။
အတွေးအခေါ်၊ ယူဆချက်တစ်ခုခုကို တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ယင်းကို ချဲ့ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဥပမာပေးခြင်း၊ တစ်တန်းလုံး ဆွေးနွေးစေခြင်းတို့မှာ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ပြန်လှန်တွေးတောချိန် ရရှိစေပြီး အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်တို့ကို ပိုမိုကြေညက် နားလည်စေပါမည်။
တွေးတောစဉ်းစားစရာ တစ်ခုခုအပေါ်တွင် အချိန်ယူ သင်ကြားသည့်အခါဝယ် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ဆင်ခြင်လေ့လာရန်၊ အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်ရန်နှင့် ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်တွင် သိမ်းဆည်းရန် လုံလောက်သော အခွင့်အရေး ကို ရရှိမည် မဟုတ်ပါလား။ လောလောဆယ် (သင်ယူနေဆဲ) အလုပ်လုပ်နေသည့် မှတ်ဥာဏ်မှာ သင်ယူခြင်း ဖြစ်စဉ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သိမှုနယ်ပယ်အတွင်း ၀င်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာ၊ အချက် အလက် များစွာကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အလျှံပယ် တင်ဆက်ခြင်း၊ သင်ကြားခြင်းတို့မှာ အသိပညာတို့ကို ရရှိစေရန်နှင့် ဗဟုသုတတို့ကို ရေရှည် မှတ်ဥာဏ်တွင် သိမ်းဆည်းရန် အခက်အခဲရှိ၏။
ကလေး၏ ဘ၀၊ ပြင်ပလောကနှင့် ဆက်စပ်ပေးခြင်း….
(လတ်တလော) ရှင်သန် အလုပ်လုပ်နေသည့် မှတ်ဥာဏ်တွင် အောင်အောင်မြင်မြင် ၀င်ရောက်လာသည့် အချက်အလက်တို့ကို ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်တွင် သိုမှီး သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ခုမှာမူ ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်မှာ မတိုင်းတာနိုင်လောက်အောင်ပင် ကြီးမားကျယ်ပြန့်မှု ရှိနေခြင်းနှင့် အချက်အလက်ကို ကန့်သတ်မှုမရှိဘဲ သိုမှီးနိုင်စွမ်းပင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၀ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စိတ္တဗေဒပညာရှင် အေဒရီးယန် ဒင်မန်း ဒီ ဂရု၏ သုတေသန လေ့လာမှုအရ ကမ္ဘာကျော် စစ်တုရင်သမားနှင့် လူသစ်တန်းတို့အကြား အဓိက ကွာဟချက်မှာ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ ရွှေ့ကွက် (သို့မဟုတ်) လတ်တလော မှတ်ဉာဏ်အား ကြီးမားခြင်း တို့ကြောင့် မဟုတ်ပါ။ သမ္ဘာရင့် စစ်တုရင်သမားတို့၏ ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်ထဲတွင် လက်တွေ့ ကစားကွက် ပုံစံမျိုးစုံတို့ကို ကျယ်ပြန့်စွာ သိုမှီး သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်းပင်။ ကစားနေစဉ်တွင် သိုမှီးသိမ်းဆည်းထားသည့် ကစားကွက်ပုံစံများထဲမှ ထုတ်နုတ်ယူခြင်းနှင့်၊ လက်ရှိကစားကွက်နှင့် လိုက်ဖက်မည့် အကောင်းဆုံး ရွှေ့ကွက်ကို သိမြင်နိုင်စွမ်းကို ဆိုလိုပါသည်။
အခြားသော စိတ္တဗေဒပညာရှင်တို့၏ ပြဿနာ အဖြေရှာခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး စူးစမ်းလေ့လာမှုများကလည်း ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သည် အဆင့်မြင့် တွေးတော စဉ်းစားခြင်းနှင့် သင်ယူလေ့လာခြင်းတို့အတွက် အရေးပါသည်ဟု ထောက်ပြထား၏။
ဆရာဆရာမများအနေဖြင့် ကလေးများ လေ့လာနေသည့် သင်ခန်းစာအသစ်တို့ကို သိရှိထားနှင့်ပြီးသော အကြောင်းအရာတို့နှင့် ဆက်စပ်ပေးခြင်းဖြင့် ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်တွင် သိုမှီးသိမ်းဆည်းရန် လှုံ့ဆော်ပေးရာ ရောက်ပါသည်။ သင်ခန်းစာအဟောင်းတို့ကို ပြန်လှန်လေ့ကျင့်စေခြင်း၊ အသစ်နှင့် အဟောင်းဆက်စပ်ပေးခြင်း၊ အဟောင်းအချင်းချင်း၏ ဆက်နွယ်မှုတို့ကို ရှာဖွေစေခြင်း၊ သိရှိထားပြီးသော အကြောင်းအရာအပေါ်တွင် အခြေခံပြီး အသိအသစ်တို့ကို ထပ်ဆင့် တည်ဆောက်ခြင်းတို့မှာ ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်ထဲတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်ရန် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသည်။
အသိပညာတို့ကို အစိတ်အပိုင်းငယ်လေးများအဖြစ် ဖြတ်တောက်၍ သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် အသစ်နှင့် အဟောင်း ဆက်စပ်ပေးခြင်း တို့ကို ထိရောက်စွာ နေ့စဉ်ပင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားရှိသော သင်ခန်းစာ ဖွဲ့စည်းပုံ organizers၊ အယူအဆ ဆက်စပ်ပုံ (concept maps)၊ အတွေးမြေပုံ (mind map)၊ ပဟေဠိများ၊ ဉာဏ်စမ်းများတို့မှာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာကောင်းလှပါသည်။
Posted by မြန်မာကျောင်းဆရာ at 7:31 PM 1 comments Links to this post
မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းဒေသက ကျေးရွာလေးတစ်ရွာမှာ မောင်ပညာဆိုတဲ့ ရေထမ်းသမား လူငယ်လေးတစ်ဦး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးလှတဲ့ သူတို့ရွာမှာ လိုအပ်နေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းနဲ့ စာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းကို လူငယ်တွေရဲ့ အင်အားနဲ့ စုပေါင်း တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ကျောင်းဆောက်လုပ် ပြီးစီးတဲ့ အခါမှာလည်း ဝေယျာဝစ္စအတွက် အလုပ်တာဝန်တွေကို ရွာလူငယ်လေးတွေ ကပဲ ကိုယ်စီ ခွဲဝေယူကြရတာပေါ့နော်။ “ကုသိုလ်ရေးမို့ မနှေးတက်ကြွ၊ ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးမို့ အားလုံး ၀ိုင်းဝန်း ကူညီကြရမယ်” လို့ ခံယူထားကြတဲ့ လူငယ်တွေ မဟုတ်လား။ ရေထမ်းသမား မောင်ပညာလေးဟာ ရွာအပြင်ဘက်က စမ်းချောင်းလေးထဲမှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ရေခပ်ထွက်ရသတဲ့။ ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းနဲ့ စာသင်ကျောင်းအတွက် ရေဖြည့်ပေးတဲ့တာဝန်ကို ယူထားရသူပါ။
မောင်ပညာလေးဟာ ဆိုင်းထမ်းနဲ့ ရေအိုး ၂ လုံးကို သယ်ပိုးပါတယ်။ ရေအိုးတစ်လုံးကတော့ အနာအဆာမရှိ၊ မဖိတ်မစင်ဘဲနဲ့ ရေအပြည့် သယ်ယူပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယရေအိုးမှာတော့ အလယ်လောက်မှာ ကွဲအက်ရာလေး ရှိနေသတဲ့။ ရေထမ်းသယ်လာရတဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ ရေတွေဖိတ်စင်ကုန်တာပေါ့။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကျောင်းကို ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ဒုတိယရေအိုးထဲမှာ ရေ တစ်ဝက်သာ ရှိတော့တာပေါ့ကွယ်။ ၂ နှစ်လောက် ကြာတဲ့အထိကို ရေသယ်တိုင်း အိုး ၂ လုံးထမ်းရပေမယ့် တစ်အိုးနဲ့ တစ်ဝက်သာ သယ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လေ။ ပထမ ရေအိုးကတော့ အပြစ်အနာအဆာ ကင်းပြီး ရေအပြည့် သယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားလို့ နေပါတယ်။ သူက ဒုတိယ ရေအိုးကို အခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။
“ဟေ့.. ငါက မင်းထက်ပိုသာတယ်ကွ။ နေ့တိုင်းပဲ ရေအပြည့်သယ်ပေးနိုင်ပေမယ့် မင်းကတော့ တစ်ဝက်သာ လုပ်နိုင်တာ။”
ဒုတိယ ရေအိုးလေးဟာ ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ဘဲ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းလို့သာ နေရတာပေါ့ကွယ်။ ရှက်ရွံ့အားငယ်စိတ်လည်း ဖြစ်နေမိသတဲ့။ ကလေးတို့မှာလည်း စိတ်ညစ်စရာတွေ ရှိသလားဟင်။
တစ်နေ့တော့ စမ်းချောင်းလေးနံဘေးမှာ မောင်ပညာဟာ ရေအိုး ၂ လုံးကို ချပြီး အမောဖြေထိုင်နေယင်း စမ်းချောင်းလေးရဲ့ ရေစီးသံနဲ့ သာယာလှပတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ရှုခင်းတွေ ကြည့်ရှု ခံစားနေခဲ့ပါတယ်။ ကလေးတို့ကော စမ်းချောင်းလေးရဲ့ ရေစီးသံကို နားဆင်ဖူးကြရဲ့လား။ စမ်းချောင်းလေးတွေက ကလေးတို့ကို တစ်ခုခု ပြောပြချင်နေကြတယ်။ ကြုံတဲ့အခါမှာ နားထောင်ကြည့်ပါကွယ်။
ခေတ္တအနားယူပြီးတဲ့နောက် မောင်ပညာလေးဟာ ရေဖြည့်တော့မယ်လို့ ပြင်ဆင်နေတုန်းမှာ ဒုတိယရေအိုးလေးက အခုလို တောင်းပန်စကား ပြောပြခဲ့သတဲ့။
“ကိုပညာ ခင်ဗျား… ကျနော် အများကြီးကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ရှက်လည်းရှက်တယ်။ အဲဒီအတွက် ကိုပညာကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ။”
“ဘာဖြစ်လို့လည်း ရေအိုးလေးရဲ့။ မင်းက ဘာတွေ စိတ်ညစ်နေရတာလဲကွာ။ ကျနော့်ကို ပြောပြစမ်းပါဦး။”
မောင်ပညာက ပြန်မေးတဲ့အခါမှာ ဒုတိယရေအိုးလေးက ၀မ်းနည်းပက်လက်နဲ့ အခုလို ပြန်ဖြေပါသတဲ့။
“ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လုံးမှာ ရွာဦးကျောင်းနဲ့ စာသင်ကျောင်းအတွက်ကို ကျနော်က နေ့စဉ် ရေတစ်ဝက်သာ သယ်ပေးနိုင်လို့ပါ။ ကျနော်မှာက ကွဲအက်နေတဲ့ အားနည်းချက်ရှိလေတော့ အပြည့် မသယ်ပေးနိုင်လို့ပါဗျာ။ ကိုပညာလည်း အင်နဲ့အားနဲ့ ကြိုစားသယ်ပိုးပေမယ့် ကြိုးစားသလောက် အပြည့်မရဘူး မဟုတ်လား။”
အဲဒီလို ကြားလိုက်ရတော့ မောင်ပညာဟာ ရေအိုးလေးရဲ့ ခံစားချက်ကို စာနာသနားမိပါသတဲ့။ ကလေးတို့ကော စိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်သူတွေကို ပြန်ပြောပြ ဖြစ်သလဲဟင်။ အင်းပေါ့.. နားလည်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိဘတွေ၊ ဆရာဆရာမတွေ ဖွင့်ပြောပြရမှာပေါ့ကွယ်။
မောင်ပညာက ရေအိုးလေးကို ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ စကားတစ်ခွန်း ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“ကဲ.. ရေအိုးလေးရေ…အချိန်လင့်တော့မယ်။ တို့တွေ အခု ရွာကျောင်းတွေဆီကို ပြန်ကြတဲ့အခါမှာ ရွာလမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဖူးပွင့်ဝေဆာနေတဲ့ ပန်းလှလှလေးတွေကို ကြည့်သွားကြရအောင်နော်။”
အမှန်ပါပဲ။ စမ်းချောင်းနံဘေးကနေ ရွာထဲဖက်ကို ၀င်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ သိပ်လှတဲ့ အရောင်စုံ ပန်းမျိုးစုံဟာ ဖူးပွင့်ဝေဆာနေကြလိုက်တာ။ ကလေးငယ်တွေ၊ မိန်းမပျိုလေးတွေနဲ့ ရွာသူရွာသားတွေဟာလည်း ပန်းအလှတွေကို ကြည့်ရှုခံစားနေသူတွေ၊ ဘုရားမှာ ကပ်ဖို့၊ စာသင်ကျောင်းအလှဆင်ဖို့နဲ့ ဆရာဆရာမတွေကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ ခူးယူနေကြသူတွေနဲ့ ရွာလုံးကျွတ်ကို ပျော်ရွှင်နေကြတယ်။ သနပ်ခါးဘဲကြားလိမ်းထားတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတွေဟာလည်း ပန်းရောင်စုံပန်လို့ ဆည်းဆာချိန်မှာ အလှကြွယ်နေပြန်တယ်။
မောင်ပညာနဲ့ ရေအိုးလေး ၂ လုံးတို့လည်းပဲ ရွာသူရွာသားတွေနဲ့အတူ ပန်းအလှတွေကို ခံစားရင်း ကြည်နူးပျော်ရွှင်ကြသတဲ့။ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ရေအိုးလေးလည်း သူ့အဖြစ်ကို ခဏလောက် မေ့ပျောက်ပြီး ပျော်ရွှင်နေတာပေါ့။ လမ်းဆုံးလို့ ရွာကျောင်းတွေဆီကို ရောက်ပြန်တော့ ရေက ဖိတ်စင်ခဲ့ရတာနဲ့ တစ်ဝက်ပဲ ကျန်တော့တာမို့ စိတ်ညစ်ရပြီ။ ဒါနဲ့ ရေအိုးလေးဟာ မောင်ပညာကို ထပ်ပြီး တောင်းပန်စကား ဆိုပြန်တယ်။
“ဒီမယ်ရေအိုးလေးရဲ့… စောစောက ရွာလယ်လမ်းပေါ်မှာ ပန်းမျိုးစုံတွေကြား ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကို အသင် တွေ့တယ်မဟုတ်လား။ တို့လည်း ပျော်ကြရတယ်နော်။ လမ်းနံဘေးက ပန်းပင်လေးတွေ၊ ပန်းပွင့်လေးတွေကြောင့်ပါ။ မင်းရဲ့ အိုးမှာ အက်နေတဲ့ဟာလေး ရှိတာကို ကျနော် အစကတည်းက သိခဲ့ပါတယ်ကွာ။ အဲဒီအတွက် ကျနော်စိတ်ကူးရပြီး အသုံးချလိုက်တာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ် တို့အလုပ် စတင်ကတည်းကပေါ့။ ရေသယ်လာရတဲ့ ရွာလမ်းတစ်လျှောက် မင်းရှိနေတဲ့ဖက်တွေမှာ ပန်းမျိုးစေ့လေးတွေကို ပျိုးကြဲထားခဲ့တယ်။ တို့တွေ နေ့တိုင်း ရေခပ်ချိန် စမ်းချောင်းလေးဆီက ရွာအပြန်လမ်းမှာ မင်းက ရေလောင်းပေးပြန်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ သိပ်မကြာခင်မှာ ပန်းတွေ ဖူးပွင့်ဝေဆာလာတာ အခုဆိုရင် ၂ နှစ်တောင်ရှိပြီပဲ။ ရွာသူရွာသားတွေဟာ ပန်းအလှတွေကြောင့် စိတ်ချမ်းမြေ့ကြတယ်။ အိမ်မှာ၊ ရွာဦးဘုရားမှာ ပန်းပူဇော်ကြတယ်။ ရွာသားလုလင်ငယ်တွေက ရွာသူလုံမပျိုတွေကို ကေသာထက်မှာ ပန်ဆင်ဖို့ ပန်းလက်ဆောင်ပေးကြတယ်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက ကျောင်းမှာ အလှဆင်ဖို့၊ ဆရာဆရာမတွေကို လက်ဆောင်ပေးဖို့နဲ့ စာသင်ခန်းတွင်း၊ စားပွဲပေါ်တင်ဖို့ ပန်းတွေခူးကြတယ်။ တကယ်လို့ ရေအိုးလေးသာ ပုံမှန်အတိုင်း ရေအပြည့် သယ်ယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အခုလို ရွာကို အလှဆင်ဖို့ ဘယ်လွယ်လိမ့်မလဲ။ မင်းရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် အားလုံး ပျော်ရွှင့်ခွင့်ရကြတာပါကွာ။”
မောင်ပညာက အခုလို အကျယ်တ၀င့် ရှင်းပြလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ရေအိုးလေးဟာ အလွန်မှကိုပဲ ကျေနပ်စွာနဲ့ သဘောပေါက် လိုက်တော့တယ်။ ခရီးလမ်းဆုံးအထိ ရေအပြည့်မသယ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် သူ့မှာလည်း ဂုဏ်ယူစရာ ရှိနေပြီ မဟုတ်လား။ ပုံပြင်လေးကတော့ ဒီမျှပါပဲကွယ်။
ကလေးတို့လည်း မျှော်လင့်ချက်ပန်းတိုင်ကို လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ခရီးလမ်းမှာ စိတ်မညစ်ကြပါနဲ့နော်။ မိမိနဲ့ အခြားသူတွေအတွက် ပျော်စရာကောင်းပြီး အကျိုးရှိမယ့် အလုပ်တွေလုပ်စရာ အများကြီးရှိပါတယ်။
အတ္တဟိတလို့ခေါ်တဲ့ မိမိရဲ့ အကျိုးနဲ့ ပရဟိတလို့ခေါ်တဲ့ အများအကျိုးကို မျှမျှတတ သယ်ပိုးနိုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by မြန်မာကျောင်းဆရာ at 11:39 PM0comments Links to this post
လူမိုက်တို့သည် မိမိကိုယ်မိမိ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သည်ဟု ယူဆကြ၏။
မိမိတို့မှာ အတိုင်းအဆမရှိသည့် သဘာဝတရား၏ ဖုန်မှုန့်မျှသာ ဖြစ်ကြောင်း သဘော မပေါက်ကြသောကြောင့် သူတို့သည် သေးငယ်၍ တဒင်္ဂ သတ္တ၀ါများသာ ဖြစ်ကြ၏။
လူတော်များသည် သဘာဝတရား၏ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်မှုကို သဘောပေါက်ကြသည့်အလျောက် မိမိကိုယ်မိမိလည်း ထိုသဘာဝတရားထံ ပုံအပ် ပူဇော်ရင်း ဖွင့်ဆို ရှင်းပြခြင်းငှာ မစွမ်းသာသော အဖြစ်အပျက်ကိုကား ဘုရားသခင်လက်ဝယ် ချန်ခဲ့ကြလေ၏။
ပညာရှိများမှာမှု လူသားအားလုံးနှင့် သတ္တ၀ါအပေါင်းတို့သည် စစ်မှန်သော သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုသို့ ဦးတည်နေကြသည်ကို နားလည် သဘောပေါက်ခြင်းကြောင့် သန့်ရှင်း စင်ကြယ်မှုကိုသာ အကြီအကျယ် အမြင့်မြတ်ဆုံးဟု အသိအမှတ်ပြုကြ၏။
The foolish assume themselves to be great,
Not realizing that they are the dust of unbounded nature.
Little and temporary creatures are they.
The clever recognize nature's greatness,
And sacrifice to her;
They leave the inexplicable event in His hands.
The wise recognize purity as the greatest state,
Knowing that all of mankind and all creatures are heading toward The real Purity.
The foolish dare not make any commitments
And try to avoid all responsibilities;
They are unreliable even to themselves.
The clever make many commitments,
Some achievable and some not,
Making the clever sometimes trustworthy and sometimes not.
The wise make group commitments.
They synergise the team to achieveacommon goal.
Usually getting the greater good as result.
လူမိုက်တို့သည် ကတိက၀တ် တစ်စုံတစ်ရာကိုမျှ မပြုရဲကြ။
တာဝန်ရှိမှုဟူသမျှကို ရှောင်လွှဲရန်သာ ကြိုးစားကြ၏။
ထို့ကြောင့် သူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို အတွက်ပင် ယုံကြည်စိတ်ချရဖွယ် မရှိ။
လူတော်များသည် မြောက်မြားစွာသော ကတိက၀တ်များကို ပြုကြ၏။
အချို့မှာ ပြီးမြောက် အောင်မြင်ဖွယ်ရှိ၍ အချို့မှာ ထိုသို့မဟုတ်ကြ။
သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် အခါခပ်သိမ်း ယုံကြည်စိတ်ချရသူများ မဖြစ်နိုင်ကြချေ။
ပညာရှိများမှာမူ အစုအဖွဲ့အလိုက် ကတိက၀တ် ပြုကြ၏။
ထိုအစုအဖွဲ့၏ ဘုံပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိအောင် စုပေါင်းအားကို ရယူကြ၏။
ယင်းအတွက် သူတို့သည် ပိုမို ကြီးကျယ် ကောင်းမွန်သော ရလဒ်ကို ရလေ့ရှိကြ၏။
The foolish are so overbearing,
They leave no space for any improvement.
The clever are willing to learn and practice everything,
But can never learn all.
The wise never consider themselves the best,
But always perform to their best naturally.
လူမိုက်တို့သည် အရာရာတွင် သူတစ်ပါးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလွန်းအားကြီးသောကြောင့် ၄င်းတို့၌ တိုးတက်ရန် နေရာလပ် မကျန်တော့ပေ။
လူတော်များသည် အရာရာကို မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာ ကျင့်သုံးကြရန် ဆန္ဒရှိ၏။ သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် အလုံးစုံကို အပြည့်အ၀ လေ့လာနိုင်စွမ်း မရှိ။
ပညာရှိများမှာမူ မိမိကိုယ်ကို အကောင်းဆုံးဟု ဘယ်သောအခါမှ မယူဆကြဘဲ မိမိတို့ စွမ်းသလောက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်သာ သဘာဝကျကျ ပြုမူ ဆောင်ရွက်ကြ၏။
The foolish long for love.
They have no self satisfaction
And seek around for companions.
The clever deny love.
They are satisfied with isolation
And suffer when they must rely on others.
The wise do not long for love,
Nor do they refuse to love and be loved.
They live happily either alone or withasoulmate.
လူမိုက်တို့သည် အချစ်ကို တမ်းတ၏။
ထို့ကြောင့် သူတို့တွင် မိမိကိုယ်ကို ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှု ဟူ၍ မရှိဘဲ ချစ်သူများ ရှာ၍သာ နေရ၏။
လူတော်များသည် အချစ်ကို ငြင်းပယ်ကြ၏။ အထီးတည်းနေခြင်းဖြင့်သာ ကျေနပ်ကြ၏။
သို့ဖြစ်၍ သူတစ်ပါးအား မှီခိုအားကိုးရမည့်အချိန်သို့ ရောက်သောအခါတွင်မူ ဒုက္ခကို ခံစားရလေ၏။
ပညာရှိများမှာမူ အချစ်ကို မတမ်းတ။ ချစ်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ အချစ်ခံရရန်သော်လည်းကောင်း ငြင်းဆိုခြင်းမရှိ။ ယင်းအတွက် သူတို့သည် အထီးတည်းလည်း ပျော်၏၊ ချစ်သူနှင့်လည်း ပျော်ရွှင်သည်သာဖြစ်၏။
The foolish succumb to passion and love,
And are often in grief.
The clever try to be free from love,
But struggle with self-love.
The wise develop their love,
From common love to real love,
From real love to universal love,
From universal love to pure love,
လူမိုက်တို့သည် ရမက်နှင့် ချစ်ခြင်း၌သာ အညံ့ခံကြ၏။
ထို့ကြောင့် မကြာခဏ ပူဆွေးသောက ရောက်ရ၏။
လူတော်များသည် ချစ်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်အောင် ကြိုးစားကြ၏။
သို့သော် မိမိကိုယ်ကို ချစ်ခြင်းနှင့်မူ လုံးထွေးရုန်းကန်နေရ၏။
ပညာရှိများမှာမူ မိမိ၏ ချစ်ခြင်းကို ဖွံ့ဖြိုးစေ၏။
ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် အချစ်မှ အချစ်စစ်သို့ လည်းကောင်း၊
အချစ်စစ်မှ လွှမ်းခြုံဖြန့်ကြက်သော အချစ်သို့ လည်းကောင်း၊
လွှမ်းခြုံဖြန့်ကြက်သော အချစ်မှ ပကတိ သန့်စင်သော အချစ်သို့ လည်းကောင်း
ဤနည်းဖြင့် ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့မှုကို ရှာတွေ့ကြ၏။
The foolish make friends ataparty,
Ususally finding the insincere ones.
Who lead their lives to disaster.
The clever make friends in the work place,
Usually merging with beneficial partners
Who help further their success.
They are friends for as long as the partnership lasts.
When business fails, so does their friendship.
The wise make friends based on spiritual awareness,
Usually finding great and true friends.
Their relationships grow beyond all worldly consitions.
လူမိုက်တို့သည် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ၌ မိတ်ဆွေရှာကြ၏။
ထို့ကြောင့် ၄င်းတို့၏ဘ၀ကို ပျက်စီးစေသော မရိုးသာသူများနှင့်သာ မိတ်ဆွေ ဖွဲ့ကြရ၏။
လူတော်များသည် အလုပ်ခွင်ထဲ၌ မိတ်ဆွေဖွဲ့ကြ၏။
ထို့ကြောင့် မိမိကို အောင်မြင်မှုများ နောက်ထပ် ပေးစွမ်းနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးပြုမည့် မိတ်ဆွေကို ရ၏။
သူတို့သည် အလုပ် စပ်တူလုပ်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး မိတ်ဆွေဖြစ်ကြ၏။
အလုပ် မအောင်မမြင်ဖြစ်သွားသောအခါတွင်မူ မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းသည်လည်း ကွယ်ပျောက်ရ၏။
ပညာရှိများမှာမူ မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းကို ဘာသာရေးအသိအမြင်ပေါ်တွင် အခြေခံ၏။
ထို့ကြောင့် လောကီအခြေအနေများကို ကျော်လွန်သော စစ်မှန်သည့် မဟာမိတ်ဆွေကြီးများကို ရ၏။
The foolish are pessimistic.
They share their dark side with others,
And are rewarded with grief and disaster.
The clever are optimistic.
They share their bright side with others and are
Rewarded with goodness but exhausted by pretense.
They wise are realistic.
They share the awareness of good and bad with others,
And strengthen their lives as they grow.
ယင်းတို့၏ အဆိုးဖြစ်ရပ်များကိုသာ သူတစ်ပါးအား မျှဝေခံစားစေ၏။
ထို့ကြောင့် ၄င်းတို့သည် ပူဆွေးခြင်းနှင့် ဘေးဒုက္ခများကို ဆုလာဘ်အဖြစ် ရကြ၏။
ယင်းတို့၏ အကောင်းဖြစ်ရပ်များကိုသာ သူတစ်ပါးအား မျှဝေခံစားစေ၏။
သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် ကောင်းခြင်းများကို ဆုလာဘ် ရကြ၏။
သို့သော် သူတို့သည် ဟန်ဆောင်ရခြင်းဖြင့် နွမ်းနယ်ကြ၏။
ပညာရှိများမှာမူ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ရှုမြင်ကြ၏။
အကောင်း-အဆိုး နှစ်မျိုးစလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သိမြင်နားလည်ခြင်းကို သူတစ်ပါးအား မျှဝေ၏။
ယင်းအတွက် သူတို့သည် အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ဘ၀လည်း ပိုမိုကြံ့ခိုင် သန်စွမ်းလာ၏။
The foolish take advantage of others,
Gaining short term relationships.
The clever are willing to be taken advantage of,
Gaining affection but feeling bitter about their relationships.
The wise tend of to share advantages with others,
Gaining love, respect and enduring relationships.
လူမိုက်တို့သည် သူတစ်ပါးအပေါ် အခွင့်ကောင်းယူတတ်သဖြင့် ရေတို ဆက်ဆံရေးကိုသာ ရ၏။
လူတော်များသည် မိမိအပေါ် အခွင့်အရေးယူခြင်းကို နှစ်သက်၏။
သို့ဖြစ်၍ သူတစ်ပါး၏ ချစ်ခင်ခြင်းကို ရသော်လည်း ယင်းတို့၏ ဆက်ဆံရေးကို အမြဲ မကျေမချမ်း ဖြစ်နေရ၏။
ပညာရှိများမှာမူ အခွင့်အရေးယူခြင်းကို အများနှင့် မျှဝေခံစား၏။
ယင်းအတွက် သူတို့သည် မေတ္တာနှင့် အကြည်ညိုကို ရရုံသာမက ရေရှည်တည်တံ့သော ဆက်ဆံရေးကိုလည်း ရ၏။
The foolish betray even their benefactors,
No one dares to deal with them.
Asaresult, they have to pay for more than what they get.
The clever are greatful to their benefactors;
Everyone wants to be nice to them.
Asaresult, they feel endless obligation.
The wise uplift the souls of their benefactors
Because it is the only true way of repayment.
Asaresult, they inspire the benefactors for greater giving,
Benefiting all mankind.
လူမိုက်တို့သည် ကျေးဇူးရှင်ကိုပင်လျှင် သစ္စာဖောက်၏။
မည်သူကမျှ ယင်းတို့ကို ဆက်ဆံရန် မ၀ံ့ကြ။
ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ရထားသည်ထက် ပို၍ ပေးဆပ်ရ၏။
လူတော်များသည် ကျေးဇူးရှင်မပေါ် ကျေးဇူးသိတတ်သဖြင့် လူတိုင်းက သူတို့ကို နှစ်သက်ကြ၏။
သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် ၀တ္တရားများကို တစ်သက်လုံး ထမ်းဆောင်ရမည်ဟု ခံစားနေရလေ၏။
ပညာရှိများမှာမူ ကျေးဇူးရှင်တို့အား စိတ်၏ချမ်းသာမှုကို ရရှိစေ၏။
အကြောင်းမှာ ဤသည်ပင်လျှင် တစ်ခုတည်းသော မှန်ကန်သည့် ကျေးဇူးဆပ်နည်းဖြစ်၏။
ရလာဒ်အဖြစ် ကျေးဇူးရှင်များအား ပို၍ ကြီးစွာသော ပေးကမ်းခြင်းကို လှုံ့ဆော်ပေး၏။
ဤနည်းအားဖြင့် သူတို့သည် လူ့ဘောင်တစ်ခုလုံးကို အကျိုးကျေးဇူး ရရှိစေ၏။
The foolish cannot keep their word.
They lose even their self-respect.
The clever are obsessed with truth
But cannot distinguish advantages from the disadvantagesin truthfulness,
And often trap themselves in the truth.
The wise mold truth and wisdom into oneness.
The truth protects them,
And their words become true.
လူမိုက်တို့သည် ကတိစကားကို မတည်နိုင်ကြ၍ မည်သူကမျှ သူတို့ကို မယုံကြည်ကြပေ။
ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားနိုင်မှုကိုပင် ပျောက်ဆုံးကြရ၏။
လူတော်များသည် အမှန်တရား၏ စီးနင်းလွှမ်းမိုးထားခြင်းကို ခံနေကြရ၍ အမှန်တရား၏ အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်တို့ကို ခွဲခြားနိုင်စွမ်း မရှိကြပေ။
သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် အမှန်တရားထဲတွင် မကြခဏ ချုပ်မိနေတတ်ကြ၏။
ပညာရှိများမှာမူ အမှန်တရားနှင့် ဉာဏ်ပညာတို့ကို တစ်သားတည်း ဖြစ်သွားအောင် သွန်းလောင်းယူကြ၍ အမှန်တရား၏ အကာအကွယ်ကို ရကြ၏။
ယင်းအတွက် သူတို့၏ စကားများသည်လည်း အမှန်တရားချည်းသာ ဖြစ်ကြရ၏။
(The Foolish, The Clever, The Wise by Charles Akara)
ကို တူဒေးအယ်ဒီတာအဖွဲ့ ဘာသာပြန်သည်။
Posted by မြန်မာကျောင်းဆရာ at 9:10 PM0comments Links to this post
“...အဲဒီတဒင်္ဂ ခဏငယ်လေးမှာ အဲဒီလူငယ်၊ လူကြီး၊ ကလေးတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးလည်း ရနေမှာ မဟုတ်လား။..”
၂၁ ရာစု မျက်မှောက်ခေတ် ကလေးဘ၀ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာစုများနဲ့ လွန်စွာ ကွာခြားလို့ နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျောင်းပညာရေးပုံစံတွေ ပြောင်းလဲလာနေတယ်။ ပညာရေးရဲ့ အဆင့်တိုင်းဟာ အရင်ကနဲ့ ကွာခြားလာနေတာကို တွေ့မြင်နေရတယ်။
မူကြိုကလေးဘ၀ကတည်းက ပုံစံခွက်ထဲမှာ ၀င်ရောက်ရတော့တယ်။ ကျောင်းကို ပို့ကြတယ်။ မူကြိုကျောင်းမှ မထားရင် ခေတ်မမီတော့ဘူး မဟုတ်လား။ လူနေမှု ဘ၀ပုံစံတွေလည်း ပြောင်းလဲလို့လာတယ်။ မိဘ ၂ ဦးစလုံးက အချိန်ပြည့် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကြရလို့ဖြစ်စေ၊ ဘ၀အစ မူကြိုပညာရေးရဲ့ ရေရှည်တန်ဖိုးကို သိမြင်လာကြလို့ဖြစ်စေ၊ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အနေနဲ့ စီးပွားဖြစ်လို့ဖြစ်စေ၊ မူကြိုကျောင်းတွေလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြို့ကြီး၊ မြို့ငယ်၊ ကျေးလက် ဇနပုဒ် နေရာအနှံ့အပြား၊ လမ်းတိုင်းမှာလိုလို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပေါ်ထွန်းလာနေပါပြီ။
မူလတန်း၊ အလယ်တန်းအဆင့်တွေမှာ ကျပြန်တော့ အားကစားဟာ မလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ အစုအဖွဲ့ငယ်လေးတွေ ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ တကယ့် အားကစားသမားကြီးတွေ စတိုင်အပြည့်နဲ့ကို ကျောင်းအဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်၊ တိုင်းအဆင့် တွေမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ နည်းစနစ်မှန်မှန်နဲ့ လေ့ကျင့်နေကြတယ်။
ဆယ်တန်းလွန်သင်တန်းများနဲ့ ကောလိပ်ကျောင်း ၀င်ခွင့်ဆိုတာကလည်း အရင်ခေတ်တွေထက်ကို ပိုပြီးတော့ ယှဉ်ပြိုင်ရွေးချယ် ခံနေရတော့တယ်။
ဒီပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်တွေမှာ မိသားစုအတွင်း ဆက်ဆံရေးလည်း ပုံစံပြောင်းလဲလို့ လာခဲ့ပါပြီ။ ကလေးအနေနဲ့ကော၊ မိဘတွေကပါ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ ခေတ်ကို ရောက်လာနေပါပြီ။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ နွေးထွေးတဲ့ မိသားစုအတွင်း ဆက်ဆံရေးနဲ့ “မိသားစုအတွင်း အကြင်နာတရား” ဟာလည်း ခေတ်ဟောင်းမှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်လာနေ ပါတယ်။ သို့ပေတဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများကတော့ ဒီရိုးရာကတော့ဖြင့်ရင် ဘယ်သောအခါမှ မဟောင်းနွမ်း သင့်ဘူးလို့ အကြံပြု တင်ပြထားကြပါတယ်။
“အကြင်နာ ကရုဏာတရားဟာ ကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနဲ့ ကျောင်း၊ စာသင်ခန်းတွင်း အခြေအနေကို တိုးတက်စေပါတယ်။” လို့ - အကြင်နာတရားနှင့် ပြုမူဆက်ဆံရေး ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကြီး - က တင်ပြ ထားပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မေတ္တာတရားနဲ့ ဘယ်လိုပြမူ ဆက်ဆံသင့်တယ် ဆိုတာကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ “စာတော်တာ၊ စာမတော်တာကို အသာထား၊ အကြင်နာတရား၊ မေတ္တာတရားနဲ့ ပြုမူဆက်ဆံခြင်းဟာ ဘ၀ အရည်အသွေးနဲ့ ပညာကိုပါ တိုးတက်လာစေတယ်။ တကယ်လည်းဘဲ တော်လာကြတယ်၊ ထူးချွန်လာကြ ပါတယ်။”
မေတ္တာတရားရဲ့ ရလဒ်ဟာ ကျောင်းစာမှာ အခက်အခဲရှိနေတဲ့ ကလေးတွေကိုသာလျှင် အကျိုးရှိစေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ အခက်အခဲနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ကြုံကြိုက်တဲ့ အခါတွေမှာ ကျောင်းသားတွေ နှင့် လူကြီးတွေကိုပါ အကျိုးများစေပါတယ်။ လူသားရဲ့ ပင်ကိုယ် အချင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “အကြင်နာတရား” ဟာ စာနာစိတ်ကို ဖွံ့ဖြိုးစေပြီး ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အသုံးတည့်လှတဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေး စွမ်းရည်ကိုလည်း ကလေးများ ရရှိ နိုင်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်တမ်းမှာ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ သူတွေနှင့် မျက်နှာစိမ်းတဲ့သူကိုပါ အခါအားလျော်စွာ ကြင်နာစွာ ပြုမူ ဆက်ဆံစေခြင်းဟာ ကလေးများကို သူတို့ ပတ်ဝန်းကျင် ကမ္ဘာငယ်လေးရဲ့ ဘောင်အပြင်ဖက်နဲ့လည်း ထိတွေ့ ဆက်ခံခွင့် ရရှိစေတာပါ။ ဒီအခါမှာ အရောင်အသွေး စုံလင် ထွေပြားလှတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကမ္ဘာကြီးကိုပါ ဆက်ဆံပြီး သား ဖြစ်လာမယ် မဟုတ်လား။
ကျောင်းစာသင်ခန်းက ဘယ်လို စတင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသလဲ။ ကြင်နာစွာ ပြုမူ လုပ်ဆောင်ဖုိ့ဆိုတာ သိပ်အခက် ကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လှုံဆော်စိတ်ကို ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ အများကြီးပါ။ အခါ အားလျော်စွာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ မကြာမကြာ ကြားနေရတဲ့ “အခါအားလျော်စွာ နေရာအနှံ အကြမ်းဖက်မှု” ဆိုတဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ ဆန့်ကျင်စွာ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ “အခါအားလျော်စွာ ကြင်နာစွာ ပြုမူဆက်ဆံမှု” လုပ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် “အခါအားလျော်စွာ” ရယ်လို့ သုံးနှုန်းရတာကတော့ “မကြင်နာတတ်၊ မစာနာတတ်၊ မခံစား တတ်သေးတဲ့ သူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆိုလိုတာပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ လူတွေ၊ ကလေးတွေအပေါ်မှာ အကြင်နာ တရားနဲ့ ပြုမူဆက်ဆံပေးဖို့ပါ။ လူစိမ်း၊ သူစိမ်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် တွေ့မြင်နေကျ ဈေးဆိုင်က ဈေးသည်တွေ၊ လမ်းဘေးလုပ်သားတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကျောင်းဆရာဆရာမ အချင်းအချင်း၊ အတန်းဖော် စတဲ့သူတွေလည်း ပါပါ တယ်။ အကြင်နာတရားနဲ့ စာနာစိတ် ကူးစက် ခံစားသွားစေဖို့ရယ်ပါ။
ကလေးများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်တယ်။ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှာဖွေသင့်တယ်။ အသက်အရွယ်နှင့် စိတ်ပါဝင်စားမှု အလိုက် လမ်းညွှန် အကြံပေးရမှာပါ။ အံ့အားသင့်လောက်တဲ့၊ “အကြင်နာ” အကြီးကြီးတွေ၊ လုပ်ရပ်ထူးတွေရယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ တိုင်းသိ၊ ပြည်သိ ပေးကမ်းလှူဒါန်းမှုနဲ့ အကြင်နာတရားကိုလည်း မဆိုလိုပါဘူး။
“ကျေးဇူးပါ” ရယ်လို့ ရိုးရှင်းစွာ ခံစား ပြောတတ်ဖို့ကစလို့ ကလေးကိုယ်တိုင် ဖန်တီးတဲ့ ပို့စကဒ်လေးမှာ “ကျေးဇူးတင် ပါတယ် သူငယ်ချင်းရယ်” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ ပေးတတ်ဖို့ပါ။ ကျောင်းတွင်း အမှိုက်ပုံးဘေးမှာ ကလေးတွေက “ကျေးဇူး” ဆိုတဲ့ စာသားကပ်ထားခြင်းဟာ သန့်ရှင်းလုပ်သားကြီးတွေရဲ့ ပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်ကိုလည်း အကူအညီပေးရာ ရောက်တယ်မဟုတ်လား။ အိမ်နီးနားချင်းရဲ့ နို့စို့ကလေးလေးကို ကူထိန်းပေးတဲ့ ကျောင်းသူငယ် လေးဟာ လူသား ၂ ဦးကို တစ်ပြိုင်တည်းမှာ ကြည်နူး ပျော်ရွှင်စေတာပါ။ မအားလပ်လောက်အောင် အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကို ခေတ္တအနားယူခွင့်၊ ကစားဖော် အသစ်လိုနေတဲ့ ကလေးလေးကိုလည်း ကြည်နူးခွင့်တွေအတွက် ကူညီပေးလိုက်တာ။
ဆရာဆရာမများကို ကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့၊ ကလေးအချင်းချင်း ကျေးဇူးစကားဆိုတတ်ဖို့ လေ့ကျင့်ပေးသင့်ပါတယ်။ အပြန်အလှန် အကူအညီပေးဖို့အတွက် လက်မနှေးဖို့။ မိုးရာသီမှာ မိုးကာ၊ ထီးမရှိသေးတဲ့ကလေးတွေကို အချင်းချင်း ကူညီပေးဖို့။ ရွာထဲက အိမ်အမိုးမလုံတဲ့ မိသားစုတွေကို စာနာစိတ်နဲ့ အင်ဖက်တချို့ ကမ်းလှမ်းတတ်ဖို့၊ ချော်လဲကျ သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ထူမပေးဖို့။ လှောင်ပြောင်ရယ်မောတတ်တဲ့ အခြားကလေးတွေကိုလည်း ကလေးအချင်းချင်း အဲဒီလို မလုပ်ဖို့ ပြောတတ်ဖို့၊ စာအုပ်စင်ပေါ်က စာအုပ်ကို လမ်းလှမ်းမမီ ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးလေးကို အခြား ကလေး ကြီး တစ်ယောက်က ကူညီပေးတတ်ဖို့ စတဲ့ “အကြင်နာ” လက်ဆောင်သေးသေးလေးတွေ အမြဲတမ်း ပေးဖြစ်နေဖို့ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်း လမ်းညွှန်ပေးရမှာပါ။ ကြင်နာစွာ ပြုံးပြတတ်ဖို့နဲ့ ချီးကျူးစကားတွေ ပြောဆိုတတ်ဖို့လည်း ကူညီပေးရမှာပါ။ အဲဒီတဒင်္ဂ ခဏငယ်လေးမှာ အဲဒီလူငယ်၊ လူကြီး၊ ကလေးတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးလည်း ရနေမှာ မဟုတ်လား။
ဒီကျောင်းရဲ့၊ ဒီစာသင်ခန်းအတွင်းက အရေးကြီးဆုံးသော သင်ခန်းစာတွေ မဖြစ်သင့်ဘူးလား။ ဒီအရေးကြီးလှတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ဘယ်လို တည်ဆောက်ကြမလဲ။
(သုခမိန် ဂျာနယ် အမှတ် ၂)
Posted by မြန်မာကျောင်းဆရာ at 4:05 AM0comments Links to this post